AmaSemalt Analytics angakhulisa kanjani amazinga akho we-SEO
Uma ungumnini webhizinisi eliku-inthanethi, kufanele usuvele ujwayelene nokwenza kahle kweinjini zokucinga, i-SEO. Kuyinhlanganisela yemikhuba yezobuchwepheshe futhi engeyona yezobuchwepheshe lapho amawebhusayithi enziwa ukukleliswa phezulu kumiphumela yosesho. Amawebhusayithi enzelwe i-SEO athola izivakashi eziningi futhi ngenxa yalokho athola ukuthambekela okwengeziwe. I-Google ne-Bing izinjini zokucinga ezithandwa kakhulu laphaya. Uma ngabe usebenzise noma iyiphi, uzokwazi ukuthi abantu abaningi abavami ukuvakashela ikhasi lesibili ukuthola abakufunayo. Ngakho-ke, ukuncintisana kwekhasi lokuqala ngokumelene negama elingukhiye lokusesha kunolaka, ukusho okuncane.
Kusukela iWeb 2.0, umhlaba wezobuchwepheshe ubonile ukuziphendukela kwemvelo okukhulu. Hhayi nje ukuthi umphakathi ubuyekeze ubuchwepheshe obusha emphakathini, ubuye wavumela amabhizinisi nezikhungo ukuthi zenze izinqumo ezinolwazi uma kukhulunywa ngezinyathelo ezibalulekile zokuthatha izinqumo. Ukugcwaliswa yisizathu esenza ukuthi bavunyelwe ukwenza njalo. Isoftware ehlaziyayo iye yabusa cishe yonke insimu nokumaketha, noma ngabe yedijithali noma ngenye indlela, yenze okuningi kuyo.
I-Semalt Analytics yisoftware ehlaziyayo evumela ukuthi abanikazi bebhizinisi be-inthanethi bakwazi ukulandela umkhondo wabo nezikhundla zabancintisana nabo ngokuqondene ne-SEO kanye nokusebenza kahle kokuthengisa. Imininingwane yayo ebanzi nehleleke kahle yebhizinisi ivumela osomabhizinisi kanye nabanikazi bewebhusayithi ukuba baqonde kangcono: amandla womkhakha wabo, ubavumela ukuba benze izinqumo ezinolwazi futhi babe ngaphambi komdlalo wabo.
Uma ufuna isoftware ehlaziya ukusiza ukukhulisa amazinga wewebhusayithi yakho, khona-ke Semal Analytics ilungile. Nakhu ukuthi uSemalt Analytics angakusiza kanjani ukukhulisa ama-SEO akho.
Isinyathelo sokuqala sokufeza noma iyiphi inhloso ukuba nesithombe esicacile sokuthi indlela eholela kuleyo nhloso ibukeka kanjani. Lokhu kusho, ukuchaza izinhloso ezicacile nezimfishane ngokumelene nomnqamulajuqu kanye nokusebenza kanzima lapho uphumelela. Kumawebhusayithi, lokhu kusho ukuthi uhlola isikhundla sakho samanje kuwebhu futhi uthole amamethrikhi athile aphathelene ne-on-ikhasi ne-SEO esekhasini.
I-Semalt Analytics ikunika amandla okuhlaziya ngokuphelele isikhundla sewebhusayithi yakho endaweni yokumela ibhizinisi. Isoftware yokuhlaziya kukusiza uqonde ikhwalithi yakho yangemuva nangokwangaphakathi. Kukusiza ukuqhathanisa izikhathi zokulayisha ikhasi lakho nalabo oncintisana nabo 'futhi kukusiza ukuthi uqonde kangcono ukulingana kwewebhusayithi yakho.
Ukuqonda lezi zinsimbi kukuvumela ukuthi uthole ukuthi udinga ukugxila kuphi futhi kukusiza ekudluliseleni ukunaka kwakho namandla kuyo. Uma ngabe uSemalt Analytics ethi awunawo amaphuzu aphezulu ku-index-mobile indexing kuqala, kulapho udinga ukugxila khona. Uma ngabe kunokubambezeleka emuva kumawebhusayithi aphezulu e-DA, abakwaSemalt Analytics bazokutshela lokho nje.
I-Semalt Analytics inika izindlela zokusebenza zewebhusayithi yakho futhi ikusize uqonde amanani wesifunda akho newebhusayithi yakho yokuncintisana. Kukusiza ukuthi uqaphele amaphethini ongeke ukuwaqaphele aholele ekutheni ube nemininingwane eminingi ngebhizinisi lakho, futhi ukukunikeze idatha yokubheka indawo ongathuthukisa kuyo futhi wakhe ubuciko ekuhambeni.
Ngama-analytics wesifunda, ungabumba isu lakho lokuthengisa libe yinto ekunika amathuba amahle kakhulu empumelelo esifundeni esithile sendawo. Inciphisa ubungozi bakho futhi ikunikeze indlela ecacile yokusika kulokho okudingeka ukukufeza futhi kukusiza uqonde ukuthi ungakufeza kanjani. Kuyakusiza futhi ukusabalalisa izinsiza zakho ngokucophelela, ukuvumela ukuthi ulondoloze izinsizakusebenza zezinto ezibaluleke kakhulu.
Gcina Abaqhudelanayo Bakho Sisondele
I-Semalt Analytics ikunikeza ithuba lokuwina ngokumelene nezimbangi zakho ngokunikeza isikhundla sabo emakethe ehambelana neyakho. Uyazi ukuthi izimbangi zakho zenzani nokuthi zikwenza kanjani. Ama-analytics angasetshenziselwa ukuhlela ngokucophelela isu lakho lokushaya ezindaweni ezithile ezingavumela iwebhusayithi yakho ukuba ikhuphuke ngaphezulu.
Uma umusha ngokwedlule, ukuqonda ukuthi izimbangi zakho zisebenza kanjani kuzokuvumela nokuthi ukhuphuke ngokushesha. Uma uthatha isinqumo sokwenza ucwaningo lwakho, kungakuthatha isikhathi esiningi. Kepha ngamaSemalt Analytics, ungaqonda kalula amasu we-SEO ancintisana nabo endaweni yakho yokusesha etholakalayo ngokuchofoza nje okumbalwa.
Isoftware ye-analytics futhi ikunikeza amandla okunciphisa intuthuko yakho ngokuhamba kwesikhathi. Usebenzisa leliqhinga, ungathola ngentshiseko impendulo kumasu akho we-SEO asevele esendaweni, bese wakhe ilogo yokuphendula ethuthukisa amazinga akho ngokuqanjwa ngakunye.
Idatha Ekulahleleni Kwakho
Nge-Semalt Analytics, ungaguqula kalula idatha ye-analytic ibe yifomethi oyithandayo. Ngokuchofoza okulula kwenkinobho, idatha yakho ingathunyelwa kuwo womabili amafomethi we-Excel ne-PDF ekuvumela ukuthi wethule imininingwane yakho ngendlela efundeka ngumuntu futhi udale izethulo zamaqembu akho namakhasimende.
Nge-Semalt Analytics, ungaba namandla amaningi wokuhlaziya onawo. Inezici eziningana ezenza kube ukukhetha okuhle kwezidingo zakho zokuhlaziya.
Mhlawumbe isici esibaluleke kakhulu se-SEO ucwaningo lwegama elingukhiye. Ukunquma amagama angukhiye okufanele ubheke kuwo futhi uhlele iwebhusayithi yakho ngokumelene kungenzeka kuphela uma uqonda kangcono indawo yokusesha. Ucwaningo lwegama elingukhiye inqubo yokudala edinga isikhathi nomzamo.
I-Semalt Analytics ikunikeza iziphakamiso zegama elingukhiye usohambeni futhi ikuvumela ukuba uqonde kangcono indawo yokusesha. Ngeziphakamiso zegama elingukhiye lazo lokuhweba, inqubo yakho ingahamba kakhulu ngempumelelo.
Ukunquma ukuthi imaphi amagama angukhiye okufanele ubhekiswe kuwo kwizinga lewebhusayithi yakho eyenziwe ngcono ye-SEO kuyingxenye yomdlalo. Ukusebenza Kwenjini Yosesho kuyinqubo elawulwa yisivivinyo nephutha. Kungemva nje kwempendulo oyithola ngemizamo yakho ye-SEO ongabona ukuthi isebenza kahle. Nge-Semalt Analytics, ungabheka ukuthi ucwaningo lwakho lwegama elingukhiye lusebenza kahle kanjani ngokwezikhundla zewebhusayithi yakho. Inikeza inani lezivakashi eziqondiswe ekhasini lakho ngamagama athile abalulekile. Kuyakusiza nokuthi udale okuqukethwe okusha ukuze uthole inani eliphakeme lemikhuba yokusesha.
Ukuqonda inani lomkhiqizo wakho kukusiza ukuthi uhambe ngokubalwa mayelana newebhusayithi yakho. Ikuvumela ukuthi uthole ukuthi iwebhusayithi yakho ibonwa kanjani ngababukeli, ikunikeze amandla okuletha imikhiqizo noma izinsiza kufinyeleleka ngendlela evamile. NgeSemalt Analytics, ubunikazi bomkhiqizo wakho bukalwa ngezinga lokuthandwa kwalo ukukunika ithuba lokusebenza ngecebo lakho lebhizinisi futhi wandise ukuqwashisa njengoba kungadingeka.
Njengoba usebenzisa isu lakho le-SEO, uzodinga amamethrikhi ezinombolo ukwahlulela ukuma kwamanje kwewebhusayithi yakho ngamagama athile abalulekile. I-Semalt Analytics ikunikeza ukuma kwegama lakho elingukhiye ngesikhathi, kukuvumela ukuthi ubone amaphethini ongase ungawaboni ngenye indlela. Isibonakaliso esibonakalayo sokusebenza kwakho singenza okuhle kakhulu uma kufikwa ekwakheni amasu amasha okudala.
Isikhala sokucinga cishe sihlala silawulwa ngumncintiswano. Kunzima ukuza ngegama lokusesha elingalwi ngenkani. I-Semalt Analytics isola izimbangi zakho futhi ikunikeze ukuqonda okucacayo kokuthi yiziphi izikhundla zabo ezikule ndawo yokusesha; lapho abanamandla khona; futhi lapho kukhona indawo yokuthatha. Ngalezi zindlela zokuhlaziya, ungancintisana nezimbangi zakho ngokuzithemba.
Izinjini zokusesha ezifana ne-Google zinefomula eyimfihlo abayisebenzisayo ukukala amawebhusayithi ngokumelana nosesho. Yize lokho i-algorithm kuyimfihlo, kukhona amamethrikhi athile anikezwe ukuthi amawebhusayithi kufanele ahlangane ukuze alungele amazinga aphezulu. Lezi zinsimbi zifaka ukufundeka, ukuhambisana kokuqukethwe kumatemu wokusesha, isivinini sesayithi nezinye izici eziningi zobuchwepheshe. I-Semalt Analytics ihlaziya iwebhusayithi yakho ukuze uqiniseke ukuthi ihlangabezana nenqubo ye-SEO ngokugcwele, futhi ayinayo indawo ebalulekile.
ISemalt Analytics Ikusiza Kanjani Ezingeni
Mane ungene ku-akhawunti yakho ye-Semalt Analytics bese uqalisa izinqubo zokuqoqa idatha. Isoftware izokunikeza umbiko onemininingwane ye-SEO yewebhusayithi yakho nalowo oncintisana nawo '. AmaSemalt Analytics asikisela ngasikhathi sinye amagama angukhiye wokusesha nemibandela ongayisebenzisa ukukhulisa ama-SEO akho. Kwenza njalo ngokuqoqa idatha nsuku zonke, ezungeza indawo okuhlosiwe yewebhusayithi yakho futhi kuhlolwe indlela yokuziphatha kwabasebenzisi nezindlela ezijwayelekile zokucinga.
Ama-analytics avuselelwa nsuku zonke ukuze ungaphelelwa isikhathi ngalokho okwenzeka esizindeni sakho sokucinga. Ngokuhlunga okuhlukahlukene okutholakalayo, ungavimba amagama athile angukhiye ukwenza ucwaningo lwakho luphumelele. Izici ezinjengegama lamagama angukhiye zingakhulisa umkhiqizo wakho.
I-Semalt Analytics futhi ikunikeza amandla okuthatha idatha nokuhlaziya bese uyiveza ngokusebenzisa iziphetho ze-API zika-Semalt. Mane ulungiselele iziphetho bese ubonisa idatha yakho yokuhlaziya kumthombo wakho owukhethile.
Ukuze ubeke iwebhusayithi kangcono kwizinjini zokucinga, i-SEO idinga ukwenziwa. Kuyinqubo yokuqamba nobuchwepheshe edinga isikhathi nomzamo. Nge-Semalt Analytics, i-SEO yewebhusayithi yakho ingenziwa ngendlela ephumelelayo, ikunikeze isikhathi nokuvumelana nezimo ukuze ugxile kwesu namasu amasha. I-Semalt Analytics ikusiza ukufeza izinhloso zakho ze-SEO ngokuchofoza nje okumbalwa.